माधव नेपालको साथमा अब प्रचण्ड मात्रै ! Canada Nepal
माधव नेपालको साथमा अब प्रचण्ड मात्रै !
काठमाडौं । राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्र हुँदैन भनिन्छ । त्यसैले होला स्वार्थ बाझिदा दलहरु विभाजन हुने र मिल्दा एकता हुने गर्छन् । यदी स्वार्थ मिल्यो भने अन्तर दलहरु मिलेर सत्ता परिवर्तन गर्न सक्छन् ।
यसका लागि सत्तारुढ दलकै नेताहरु प्रयोगमा पर्ने गर्छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण हो, ओली सरकार विस्थापित गरेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउनु ।
यसका सत्तारुढ दल एमालेकै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र उनको समूहलाई नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहितका तत्कालीन विपक्षी दलहरु प्रयोग गरे ।
माधवकुमार नेपाल र उनको समूहको सहयोगमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताच्यूत गरेर बालुवाटारबाट बालकोट पु¥याए । आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष ओलीलाई सत्ताच्यूत गर्ने कार्यमा नेता नेपाललाई साथ दिएका नेताहरु अहिले घट्दै जाँदा प्रचण्ड मात्रै देखिन थालेका छन् ।
आफ्नै पार्टीको सरकार ढाल्नु गलत रहेको बोल्न नसकेपनि नेपाल समूहका नेताहरु पार्टी एकताका लागि भन्दै संस्थापन ओली समूहमा जान थालेका छन् । विशेषगरी मिर्गाैला प्रत्यारोपण गराएर अहिले भारतको एपोलो अस्पतालमा स्वास्थ्य लाभ गरिरहेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल पनि पार्टी एकताको पक्षमा उभिएका छन् । उपाध्यक्ष वामदेव गौतम पनि ओली समूहको बैठकमा सहभागी हुने गरेका छन् ।
वरिष्ठ र शीर्षनेताहरुले माधवकुमारको साथ छाडिरहँदा साविक नेकपादेखि साथ दिँदै आएका प्रचण्ड भने अझै रहिरहेका देखिन्छन् । बेलाबखत कोटेश्वर पुगेर नेता नेपालसँग भेट्न गरेका छन् ।
नेता नेपालले पनि कुनै निर्णय लिनुपर्दा प्रचण्डकै साहरा लिएको देखिन्छ । जस कारण माधवकुमारको साथमा अब प्रचण्ड मात्रै भनेर टिप्पणी गरिन थालेको छ ।
माधवकुमार नेपाल समूहमा रहेका युवा नेताहरु क्रमशः संस्थापन पक्षमा जान थालेका छन् । लामो समयदेखि नेपाल समूहमा रहेका विष्णु रिजाल ओली समूहमा गएको धेरै भइसक्यो ।
यता उपाध्यक्ष भीम रावल पनि पार्टी एकताका लागि भन्दै नेपाल समूहले गरेका कतिपय निर्णय अस्वीकार गर्ने र बैठकमा सहभागी नहुने गरेका छन् ।
गत असार २ गते उपचारका लागि दिल्ली जानु अघि पार्टी एकताको सन्देश दिएका वरिष्ठ नेता खनालले पछि देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिएको आह्वानको विषयले राजनीतिक वृत्तमा खैलाबैला मच्चिएको थियो ।
दिल्ली उठ्नु अघि खनालकै आग्रहमा भीम आचार्यले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको भए पनि पछि उपचारकै बेला देउवालाई मत दिन आह्वान गरेर जारी गरेको विज्ञप्तिबारे स्वयं खनाल नै अनविज्ञ रहेपछि नेपाल समूहमा फाटोको अवस्थासमेत आएको नेताहरु बताउँछन् ।
श्रावण २५, २०७८ सोमवार १७:१३:४२ बजे : प्रकाशित